Casserole သယ်ဆောင်သူများထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးပေးသူများ - China Casserole Carrier Factory
အပူ panel နဲ့ Cationic polyester extensible casserole လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအိတ်
ဒီ casserole carrier အေးခဲအိတ်သည်အထူးသဖြင့်ယူအက်စ်စျေးကွက်တွင်အလွန်မှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်ဤအိတ်များစွာကို USA သို့ရောင်းသည်။ ပူပြင်းတဲ့အစားအစာများကိုပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်သင်၏ casserole ဖန်တီးမှုကိုနာရီသို့မဟုတ်အအေးပေးထားပါ။ သန့်ရှင်းဆေးရန်လွယ်ကူသည်။ casserole အိတ်တစ်ခုစီတွင်အောက်ခြေတွင်ကြီးမားသောအဓိကအခန်းနှင့်တိုးချဲ့နိုင်သောထိပ်တန်းအခန်းတစ်ခုရှိသည်။ ၀ န်ထမ်းအသုံးအဆောင်များသို့မဟုတ်လက်သုတ်ပဝါများကိုင်ဆောင်ထားရန်လွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူသောအပြင်ဇစ်အိတ်ဆောင်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အပူ panel သည်အပိုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖက်ရှင်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အတူ polyester extensible casserole carrier အိတ်
ဒီ casserole carrier အေးခဲအိတ်သည်အထူးသဖြင့်ယူအက်စ်စျေးကွက်တွင်အလွန်မှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်ဤအိတ်များစွာကို USA သို့ရောင်းသည်။ ပူပြင်းတဲ့အစားအစာများကိုပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်သင်၏ casserole ဖန်တီးမှုကိုနာရီသို့မဟုတ်အအေးပေးထားပါ။ သန့်ရှင်းဆေးရန်လွယ်ကူသည်။ casserole အိတ်တစ်ခုစီတွင်အောက်ခြေတွင်ကြီးမားသောအဓိကအခန်းနှင့်တိုးချဲ့နိုင်သောထိပ်တန်းအခန်းတစ်ခုရှိသည်။ လက်ကိုင်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီးအပြင်ပန်းဇစ်ပါအိတ်ကပ်များကိုအမှုတော်ဆောင်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်လက်သုတ်ပဝါများကိုင်ထားသည်။ အပြင်ဘက်တွင်ပစ္စည်းသည် PVD ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတာရှည်ခံသော PVC ဖြင့် 300D / 600D polyester ဖြစ်သည်။ ...
ကွက်အိတ်ကပ်နှင့်အတူနှစ်ထပ်ကုန်းပတ် casserole လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအိတ်
သင်သည်သင်၏နောက်ညစာစားပွဲသို့တက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ potluck၊ အိမ်နီးချင်းဖြစ်စေပါတီပွဲသို့ဖြစ်စေ၊ tailgating ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်စေဖြစ်စေ၊ ခေတ်မှီသော casserole လေယာဉ်တင်သင်္ဘောသည်သင်အကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာများကိုအထူးပွဲများအတွက်သယ်ယူရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငါတို့က casserole သယ်ဆောင်ရန်ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှုကိုဆက်ကပ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အိမ်ရှင်မသို့မဟုတ် guest ည့်သည်ကိုမွေ့လျော်စေမည့်ပုံစံမျိုးစုံ၊ စတိုင်လ်များနှင့်ပျော်စရာအရောင်မျိုးစုံကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ သင်၏နွေးထွေးသောအစားအစာများကိုနွေးထွေးစေပြီးအအေးအစားအစာများကိုအေးစေပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်! သင်ပိုမို sto ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင် ...
ဒီ casserole carrier အေးခဲအိတ်သည်အထူးသဖြင့်ယူအက်စ်စျေးကွက်တွင်အလွန်မှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်ဤအိတ်များစွာကို USA သို့ရောင်းသည်။ ဤတာရှည်ခံခရီးသွားအိတ်နှင့်အတူပူသောအစားအစာများကိုဘေးကင်းစွာပို့ဆောင်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာထားရှိပါ။ သင်၏ casserole ဖန်တီးမှုကိုနာရီသို့မဟုတ်အအေးထားပါ။ သန့်ရှင်းဆေးရန်လွယ်ကူသည်။ ပြင်ပပစ္စည်းမှာ 600D / 300D polyester ဖြစ်ပြီး PVC coated နှင့်အလွန်ကြာရှည်ခံသည်။ အိတ်၏နံရံတွင်အဖြူရောင် PEVA၊ မီးခိုးရောင် PEVA သို့မဟုတ်လူမီနီယံသတ္တုပြားများဖြစ်နိုင်ပြီးအစားအစာနှင့်ထိတွေ့ရလွယ်ကူပြီးစိုထိုင်းသောအထည်ဖြင့်လွယ်ကူစွာသန့်ရှင်းနိုင်သည်။ အများအားဖြင့် 3-4mm အထူကိုသုံးတယ်။
အပူ panel နဲ့ Cationic polyester casserole လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအိတ်
ဒီ casserole carrier အေးခဲအိတ်သည်အထူးသဖြင့်ယူအက်စ်စျေးကွက်တွင်အလွန်မှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်ဤအိတ်များစွာကို USA သို့ရောင်းသည်။ ပူပြင်းတဲ့အစားအစာများကိုပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်သင်၏ casserole ဖန်တီးမှုကိုနာရီသို့မဟုတ်အအေးပေးထားပါ။ သန့်ရှင်းဆေးရန်လွယ်ကူသည်။ အပူ panel သည်အပိုဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီးကားအားသွင်းရန်အတွက်သင့်တော်သောအချိန်သည်ပိုမိုပူသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ပြင်ပပစ္စည်းသည် PVC coated နှင့် cationic polyester ဖြစ်ပြီးအလွန်ကြာရှည်ခံသည်။ အိတ်၏နံရံတွင်အဖြူရောင် PEVA၊ မီးခိုးရောင် PEVA သို့မဟုတ်အလူမီနီယမ်သတ္တုပြားများဖြစ်နိုင်ပြီးအစားအစာအဆက်အသွယ်အတွက်လုံခြုံသည်။
နှစ်ဆလက်ကိုင်နှင့်အတူ Polyester ထည် casserole လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအိတ်
Polyester ထည် casserole လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအေးအိတ်
သင်သည်သင်၏နောက်ညစာစားပွဲသို့တက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ potluck၊ အိမ်နီးချင်းဖြစ်စေပါတီပွဲသို့ဖြစ်စေ၊ tailgating ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်စေဖြစ်စေ၊ ခေတ်မှီသော casserole လေယာဉ်တင်သင်္ဘောသည်သင်အကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာများကိုအထူးပွဲများအတွက်သယ်ယူရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငါတို့က casserole သယ်ဆောင်ရန်ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှုကိုဆက်ကပ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အိမ်ရှင်မသို့မဟုတ် guest ည့်သည်ကိုမွေ့လျော်စေမည့်ပုံစံမျိုးစုံ၊ စတိုင်လ်များနှင့်ပျော်စရာအရောင်မျိုးစုံကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ သင်၏နွေးထွေးသောအစားအစာများကိုနွေးထွေးစေပြီးအအေးအစားအစာများကိုအေးစေပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်! ဒီ casserole လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအေး ...